Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Syria tamin’ny Jolay 2011
Syria · Jolay, 2011
Tantara mikasika ny Syria tamin'ny Jolay, 2011
Fanoherana30 Jolay 2011
Ady & Fifandirana12 Jolay 2011
Fahalalahàna miteny11 Jolay 2011
Global Voices Podcast 1: Iza no inoantsika an-tserasera?
Afrika Mainty03 Jolay 2011
Mitenena Manahoana amin'ny podcast-nay vaovao [fandraisam-peo]! Fizarana 1: Miresaka momba ilay fitaka Gay Girl in Damascus; Mihainoa ny feo avy any Ginea-Bisao; ary ny resadreseka tamin'i Firuzeh Shokooh Valle momba ny asany amin'ny maha-tonia mpanitsy amin'ny teny Espaniola azy. [Amin'ny teny anglisy daholo ny fandraisam-peo]